LEAGOO KIICAA MIX Isku Aadka Caalamiga | Androidsis
LEAGOO KIICAA MIX isku aadka caalamiga ah
Dhowr maalmood ka dib hadalkeeda cusub LEAGOO KIICAA MIX, dhammaan astaamaheeda y halkaas oo aad kaga heli karto qiimaha ugu fiican, waxaa la gaadhay waqtigii bulshadeenna oo dhan laga farxin lahaa isku aadka caalamiga ah ee casriga ah ee xiisaha leh gebi ahaanba bilaash ah.
Kaqeybqaadashada iyo guuleysigu waa mid aad ufudud, halkan waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
1 Sidee loogu guuleystaa LEAGOO KIICAA MIX?
2 LEAGOO KIICAA MIX Features
Sidee loogu guuleystaa LEAGOO KIICAA MIX?
Si aad ugu guuleysato taleefannadan casriga ah waa inaad raacdaa tilmaamaha lagu muujiyey Gleam-kan. Sida aad u aragto waa wax aad u fudud ... sidoo kale waa isku aadka caalamiga ah sidaa darteed Waad guuleysan kartaa waddanka aad doontaba ha noqotee!
LEAGOO KIICAA MIX Features
Qaybta ugu caansan ee qaabka cusub ee Leagoo waa iyada naqshad bandhig cusub oo aan xuduud lahayn. Intaa waxaa dheer, marka laga eego dhinaca waxqabadka, waxay la timid qalab shaashad 5,5-inji ah, MediaTek MTK6750T Octa-Core processor-ka oo ah 1.5 GHz. 3 GB oo RAM ah oo ay sameeyeen Samsung iyo 32 GB oo ROM ah waa lagu sii ballaarin karaa iyadoo la isticmaalayo kaararka microSD.
Heerka sawir qaadashada waxay ku timaaddaa kamarad gadaal ah 13 iyo 2 megapixels iyo a 13 megapixel kamarad hore kaas oo aan ku awoodi doonno inaan ku qaadno sawirro iskudhaf ah oo aad u sarreeya.
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale kujirtaa akhristaha faraha iyo 3000 mAh LG batari iyadoo tikniyoolajiyad degdeg ah lagu dalaco.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan aaladan, boos celinta iyo iibsashada halkan waad geli kartaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dood-wadaag » LEAGOO KIICAA MIX isku aadka caalamiga ah
Xagee u diraa cinwaankayga si aan u helo….
Jawaab Richards Rivas Leon
Alex Jimënëz dijo
Waxaan rabaa inuu ka farxiyo
Jawaab Alëx Jîmënëz
Horaa laygu qoray ... Taleefanka gacanta ma haysto? ... waan rabaa fadlan
Kujawaab Kristofer M'ch
Waa bakhtiyaa-nasiib, maahan tartan oohin !!!!.
Jawaab Ale Font
Waxaan rabaa taleefanka gacanta? fadlan
Ku jawaab Mangaka Hernandez
Waxaan ku galayaa kuwa !!! Waxaan rabaa taleefan gacmeed cusub !!!
Ku jawaab Vásquez V Maredaki
Durba kaqeyb gal ragga
Jawaab Gino Cambray
Alex Rodriguez Suarez muuqaalka booska dijo
Waxaan horeyba u rabay cel p: 'v
Jawaab Alex Rodriguez Suarez
Ciise Leal dijo
Kaqeyb qaatay 🙂
Ku jawaab Jesús Leal
Waad ku mahadsan tahay bixintaan cajiibka ah; galay!
Jawaab Manjit Sarma
Hereberto Godoy dijo
Diyaar Ayaan doonayaa inaan guuleysto !!!!!!
Ujawaab Heriberto Godoy
Waligaa waxba ha guuleysan, mid baan rabaa!
Jawaab Jeorge Cristian De La Cruz Loyola
Waxaan rajeynayaa inaan kasbado
Jawaab ku sii Carlos Franco Ramirez Hernandez
La dhammeeyay, oo leh 3-da tallaabo
Jawaab Paul Alexis Salinas Rosales
Nuley malag dijo
Patricia Velasco by sigustas?
Jawaab Nuley Angel
Kaqeyb qaatay Waxaan rabaa inaan guuleysto !!
Jawaab Edwin Chavez Ortega
Ku jawaab Maria Teresa Fernandez Ferreira
Weligiis kuma guuleysan wax aan rajeynayo
Guul inkasta oo aan rajaynayo in aan nasiibku ku filnahay ??
Jawaab Fabian Jhonatan Cam
Duqa magaalada Israel dijo
Kaalay, waa inaan sii wadnaa kaqaybqaadashada
Jawaab Israel Mayorga
Waxaan u imid isku aadka: 3: v
Ku jawaab Roman Alvarado
Alvaro Jimenez sawirka meeleeyaha dijo
Marhore waan kaqeyb galayaa, waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto
Ku soo jawaab Alvaro Jimenez
waa maxay bogga facebook? youtube iyo tecnomundo? Waxaan ubaahanahay inaan ku sameeyo cashar ku saabsan boggeyga sida kooxdaas u shaqeyso iyo haddii ay ku guuleysato wax yar oo caan ah?
Taariikhdee ayuu isku aadka noqon doonaa? iyo sida loogu dhawaaqi doono guuleystaha.
Miyaad xayeysiin ku leedahay shaashadda qufulkaaga? SpeedCharge iyo BoostCharge ayaa ah dhibaatada